Manicure, Pedicure | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nchịkọta: Ntucha, Nkwụsị
Enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti CND Shellac na OPI Gel Color?
Enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti CND Shellac na OPI Gel Color? Ana m esonye na azịza mbụ. Ọganihu na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ndị gel lacquers GC lacquer CND, adịwo ogologo oge n'omume. Ugbu a ...
Gwa m otu esi adọta ndị ahịa ka ha bụrụ onye na-amalite isi na manicure? M ga-ekele gị maka ihe atụ si na ndụ.
Gwa m otu esi adọta ndị ahịa ka ha bụrụ onye na-amalite isi na manicure? M ga-ekele gị maka ihe atụ si na ndụ. Nlereanya. Mgbe ọmụmụ mbu, iji tụnyere ihe m na-eme na ihe i nwere ike ịhụ ...
kedu ihe bụ ntụpọ ma ọ bụ ịnyịnya ibu maka maniura
Gịnị bụ ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ maka maniaur bụ ntụpọ - ngwaọrụ maka imepụta ntu. na-eji ya, isi ihe dị iche iche nke diamita na-adọta, mmetụ ọ bụla nke ntụpọ na-esote nkọwa dị nta karịa ...
Esi ewepu mkpịsị naroshti?
Mwepụ nke ndọtị dị ka mbọ? Kpara akwụ ụlọ ma na-bee ọtụtụ ma ọ bụ na-aga Ụlọ Mmanya, ebe ị Spila Were tuwizas na ntu mkpa na bee adịgboroja mbọ na ...
Ụmụ agbọghọ ole ka ha ga-esi gbanye na oriọna gel a varnish ????
Girls otú nkụ na oriọna jel ntu ???? si 3 10 ka nkeji, dabere na ole na agba na ya ịgụ na mbọ 2 nkeji na UV oriọna ma 30 s ...
Gini mere mkpiri-ukwu m ji adighi mma mgbe m gbutuo ntutu m, obu ezie na m na-asa m ụkwụ kwa ubochi?
Gini mere mkpiri-ukwu m ji adighi mma mgbe m gbutuo ntutu m, obu ezie na m na-asa m ụkwụ kwa ubochi? Na dọta uche site na ebe ha na-etolite Na-akụ ọ bụghị mbọ, ma ihe na-agbakọta n'okpuru ...
Ike na biogel ma ọ bụ acrylic?
Ikwusi ike na biogel ma obu acrylic? Ọ na - eme ka biogel dị ike karịa - ọ na-agbanwe agbanwe ma na - akụchi mgbe etigburu, ọ bụghị chipped. Ọ bụrụ na nna ukwu mbụ nwere nsogbu na bio, mgbe ahụ ọ bara uru ...
onye maara ihe ntụpọ ojii na mbọ ahụ pụtara?
onye maara ihe ntụpọ ojii na mbọ ahụ pụtara? Na mbọ? ma ọ bụ n'okpuru mbọ? ọ bụrụ na ọ dị n'okpuru, ọ na - ekwu na enweghi vitamin zuru oke na enweghị calcium, mbọ anaghị adị ike ...
kedu ka esi emekwuo efere ntu?
kedu ka esi emekwuo efere ntu? n'okpuru ahihia na-agaghị ebipụ, ọ bụ micronihia dị ka. Onu ogugu kwesiri ka obula, ma di nma karia foto.
Achọrọ m ịkpụcha mbọ aka n'ụlọ. ebee ka ị ga-amalite, ebee ka ndị ahịa ga - enweta?
Achọrọ m ịkpụcha mbọ aka n'ụlọ. ebee ka ị ga-amalite, ebee ka ndị ahịa ga - enweta? Koshka Umnaja bụ ihe ziri ezi Ma achọghị m itinye aka na ịkpụ aka n'ahụ, mee ka ugboro abụọ mara, gbasaa ozugbo =) na mberede! Na ...
Shellac ma ọ bụ gel-lacquer
Shellac ma ọ bụ gel-lacquer shellac bụ ihe dị mkpa nke gel-lacquer. ha dị iche na ụzọ e si etinye ha (nke a bụ m maka itinye ntinye mbụ), ọhụhụ, ụcha ụcha na iwepụ (a na-ewepu ya ngwa ngwa, ma ...
Esi mee ka akpụkpọ gị dị nro ma dịkwuo n'ụlọ
Dị ka n'ụlọ iji mee ka akpụkpọ anụ aka na nke dị nro aka na-elekọta n'ụlọ adịghị mfe, ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ndụmọdụ ụfọdụ. Ihe ole na ole maka ilekọta akpụkpọ aka ...
kedu ka a na - akpọ polish pụrụ iche maka ndị na - ata mbọ ha ... Enweghị m ike ịmị nwa ahụ
kedu aha aha ntu ntu nke puru iche nke ndi napughari ntu… Enweghi m ike ikpochapu Nekusayka site na Princess (ihe ịchọ mma ụmụaka) vdị varnish a dị na usoro nke Lady Rose, mana ọ ka bụ ihe na-adọrọ adọrọ ...
Enwere m ike ibute nje HIV site na ịme ihe ntanetị?
Enwere m ike ibute nje HIV site na ịme ihe ntanetị? nje AIDS bu nje di egwu nke na-adighi ike ... mgbe ahụ, iji nweta nje HIV, ị chọrọ ụfọdụ mkpụrụ ndụ nke nje a, ọ bụghị eziokwu na ha nọ na ego a ...
Ntu aka ma ọ bụ mbọ aka ukwu, exfoliate. Kedu ihe m kwesịrị ime?
Ntu na-agbaji nke ukwuu, na-azọ. Ihe ị ga-eme smear mbọ kwa ụbọchị na mmanya tincture nke calendula (rere ya na ahịa ọgwụ). Ntu ga-eto ogologo ma sie ike. Almọnd - bara uru maka mbọ. Na-atụ aro ...
Ndi oriọna ultraviolet dị ize ndụ?
Oriọna UV dị ize ndụ? Azịza ọchị! Karịsịa banyere ụlọ ọgwụ ndị ọkụ na - eji ọkụ ultraviolet na - ehichapu ọkụ niile !! ! UV oriọna maka ịgbatị ntu adịghị mma. Igwe radieshon dị n’ime ha abụghị onye nke…
nyere aka chọpụta abụ maka ụbọchị ọmụmụ nke onye nkụzi klas
nyere aka chọpụta abụ maka ụbọchị ọmụmụ nke onye nkụzi klas maka manicure banyere manicure! Klassuku na ụbọchị omumu ọmụmụ Anyị na-achọ ekele, Anyị chọrọ ka ị nwee obi ụtọ, Iji dozie nsogbu niile! Na ihe niile ị na-aghọta, Ọ dịghị ihe ojoo, Iji ezi obi hụ, High ...
Mee ngwa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị kpoo ihe ọkụkụ na oriọna na ole ole ka ị na-etinye biogel na ntu ahụ?
Mee ngwa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị kpoo ihe ọkụkụ na oriọna na ole ole ka ị na-etinye biogel na ntu ahụ? 1) Okwesighi ka ahihia, 2) ihe ndi ozo na adighi acho ihe mbu ...
Kedu esi ewepu mkpịsị aka gị?
Kedu esi ewepu mkpịsị aka gị? . Na obere efere, kpoo mmanụ olive ma tinye aka gị na ya. Jide ruo mgbe mmanụ cools. Nye mmanụ ka igbapu, tinye na uwe gloves na ...
Nwee ma ọ bụ bounder? Ndi umuaka kwesiri iji primer na uzo maka ntu ntu? Ihe ndị a 2 ka a chọrọ? Ọ bụrụ na
Primer ma ọ bụ bonder? Girlsmụ agbọghọ kwesịrị iji primer na nkekọ maka mbọ gel? Ngwakọta abụọ a bụ iwu? Ọ bụrụ na Primer - ọ nọ n’Afrịka - a na-ahụ ụzọ bụ acid nke…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,736.